Tahriibayaal African ah oo dooni kula qalibmatay xeebaha Sudan ee badda cas – SBC
Tahriibayaal African ah oo dooni kula qalibmatay xeebaha Sudan ee badda cas
Posted by editor on Julaay 6, 2011 Comments
Khartoum :- Warbaahinta dalka Sudan ayaa sheegtay in 197 muhaajiriin African ah ay ku dhinteen biyo goboleedka Sudan ee badda cas, kadb markii ay qalibmatay dooni ay ugu safrayeen si sharcid dara ah dalka sucuudiga.
Xarunta adeega warbaahineed ee hoos tagta xukuumada Sudan ayaa sheegtay in saddex qof oo keliya la soo badbaadiyey oo kamid ahaa rakaabkii doonida la scoday.
Xarunta ayaa tilmaamtay in maamulka Sudan oo gacanta ku dhigay afar yemeniyiin ah oo kamid ahaa shaqaalihii doonta.
Ilo wareed ayaa sheegay in dhacdadaani ay timid kadib markii ay gubatay doonidii ay saarnaayeen muddo afar saac oo ay kujireen badda cas sababo aan la garanayn awgood.
Wakaaladda AFP oo soo xignaysa afhayeenka booliska sudan ninka lagu magcaabo Axmed Al-tahaami ayaa xaqiijiyey dhacdadaas balse waxa uu ka gaabsaday in uu wax tafaasiil ah ka bixiyo sida ay wax u dhaceen.
Weriye katirsan BBC-da ayaa sheegay in badda cas ay tahay wado la yaqaan oo looga tahriibiyo dadka dowladaha sucuudi carabiya iyo Yemen.
Sidoo kale maamulka Sudan ayaa fashiliyey isku day labaad oo lagu tahriibinayey 247 qof oo ajaanib isugu jira dalalka Chad, Nigeria, Somalia iyo Eritrea, kuwaasi oo laga soo qabtay deegaanka lagu magcaabo Turkantaay ee bariga Sudan.
Ustaad C/xakiim Maxamed Cumar